Nicolaus Copernicus. Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato isaga | Saadaasha Shabakadda
Adduunyada cilmiga xiddigiska, waxaa jira dad sameeyey daahfur fara badan oo isbeddel ku sameeya wax kasta oo ilaa hadda la ogaa. Tani waa waxa ku dhacay Nicolaus Copernicus. Waxay ku saabsan tahay cirbixiyeen reer Poland ah oo dhashay 1473 kaasoo sameeyay aragtida heliocentric. Looma aqoonsan kaliya sameynta aragtidan, laakiin wuxuu bilaabay aqoonsi dhan oo cilmiyaysan wajiga cilmiga xiddigiska xilligaas.
Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato Nicolás Copernicus iyo ka faa'iideysigiisa? Wax walba waan kuu sharxeynaa.
1 Taariikh nololeed
2 Aragtida Heliocentric
3 Saamaynta shaqadiisa
4 Nicolaus Copernicus iyo burburinta xiddigiska 'Ptolemaic astronomy'
Kacaankii cilmiga xiddigiska ee Copernicus wax ku darsaday waxaa loogu yeeray kacaankii Copernican. Kacaankani wuxuu gaadhay ahmiyad aad uga fog dhulkii cilmiga xiddigiska iyo sayniska. Waxay calaamad u ahayd taariikh muhiim ah taariikhda fikradaha iyo dhaqanka adduunka.
Nicolás Copernicus wuxuu ka dhashay qoys hodan ah oo shaqadooda ugu weyni tahay ganacsi. Si kastaba ha noqotee, wuxuu agoon ku noqday da'da 10. Cidlo soo food saartay, adeerkiis hooyadiis ayaa daryeelay. Saamaynta adeerkiis wuxuu wax badan ka caawiyey Copernicus inuu ku kobco dhaqanka isla markaana uu kiciyo xiisaha badan ee ah inuu wax ka ogaado Caalamka. Sababtuna waxay tahay wuxuu ahaa kaniisad ku taal Kaniisadda Frauenburg iyo Bishop of Warmia.
Sannadkii 1491 wuxuu galay Jaamacadda Krakow iyadoo ay ugu wacan tahay tilmaamaha adeerkiis. Waxaa loo maleynayaa in, hadaanu agoon noqon, Copernicus uusan waxba ka badnayn ganacsade sida qoyskiisa oo kale. Horay ayuu uga sii horumarey jaamacada, wuxuu usii safrey Bologna si uu u dhammeeyo tababarkiisa. Wuxuu qaatay koorso sharciga buugaagta waxaana lagu baray bini'aadannimada Talyaaniga. Dhammaan dhaqdhaqaaqyadii dhaqameed ee xilligaas waxay ahaayeen kuwo go'aamiyay isaga inuu ku dhiirrigeliyo inuu horumariyo aragtida heliocentric ee u oggolaatay kacaan.
Adeerkiis wuxuu dhintay 1512. Copernicus wuxuu sii waday inuu ka shaqeeyo booska kiniisadda ee kaniisadda. Horay bay u ahayd 1507 markii uu faahfaahin ka bixiyay bandhigiisii ​​ugu horreeyay ee aragtida heliocentric. Si ka duwan wixii loo maleynayay in Dhulku yahay udub-dhexaadka Caalamka iyo in dhammaan meerayaasha, oo ay ka mid tahay Qorraxda, ay ku meeraystaan ​​hareeraha, ka soo horjeedka ayaa la muujiyay.
Aragtidan waxaa lagu arkay sida ay Qorraxdu udub dhexaad u tahay Nidaamka qoraxda Dhulkuna wuxuu leeyahay meerto ku wareegsan. Aragtidan heliocentric-ga ah, nuqulo fara badan oo gacmeed lagu qoray qorshaha ayaa la bilaabay in la sameeyo waxaana faafiyay dhammaan inta baratay cilmiga xiddigiska. Thanks to aragtidan, Nicolás Copernicus waxaa loo tixgeliyey cirbixiyeen caan ah. Dhammaan baaritaannadii uu ku sameeyay Caalamka wuxuu ahaa inay ku saleeyaan aragtidan ay meerayaasha ku meeraysanayaan Qorraxda.
Markii dambe, wuxuu dhammaystiray qorista shaqo weyn oo kacdoon ku samaysay wax kasta oo lagu yaqaan cilmiga xiddigiska. Waxay ku saabsan tahay shaqada Kacaankii meerayaasha cirka. Waxay ahayd heshiis cilmiga xiddigiska ah oo la ballaadhiyey si sharraxaad buuxda loo sharraxo loona difaaco aragtida heliocentric. Sidii la filayay, si loo soo bandhigo aragti wax ka beddeshay dhammaan waxyaabaha hadda laga aaminsan yahay Caalamka, waxay ahayd in lagu difaaco caddeyn beenin karta aragtida.
Shaqada waad arki kartaa taas Adduunku wuxuu lahaa qaab dhismeed dhammaystiran, halkaasoo dhammaan dhaqdhaqaaqyada u badnaa ay ahaayeen kuwo wareegsan, maaddaama ay iyagu ahaayeen kuwa keliya ee ku habboon dabeecadda meydadka cirka. Qoraalkiisa, iskhilaafyo badan ayaa laga heli karaa rimidda Caalamka illaa waqtigaas. In kasta oo Dhulku uusan ahayn xarunta iyo meerayaasha meerayaasha kuma aysan wareegin, haddana sidoo kale ma jirin xarun keliya oo ay wadaagaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada cirka ee nidaamkeeda.
Wuxuu ka warqabay marwalba tirada dhaliisha shaqadan kicin karto markii shacabka loo bandhigo. Adiga oo ka baqaya in la canaanto, waligiis ma helin inuu siiyo shaqadiisa si uu u daabaco. Waxa ay sameysay waxay ahayd in daabicitaanku ku faafay mahadnaqa faragelinta cirbixiyeen Protestant ah. Magaciisu wuxuu ahaa Georg Joachim von Lauchen, oo loo yiqiinay Rheticus. Wuxuu awooday inuu booqdo Copernicus intii u dhaxaysay 1539 iyo 1541 iyo wuxuu ku qanciyay inuu daabaco heshiiska oo uu kordhiyo. Taasi waxay mudnayd in la akhriyo.
Shaqadu waxay soo shaac baxday toddobaadyo yar ka hor geerida qoraaga. Ilaa waqtigaas, fikirka juquraafi ahaaneed ee koonka wuxuu lahaa si ka duwan sidii hore. Ptolemy iyo aragtidiisa juquraafi ahaaneed waxay hormuud ka ahaayeen 14 qarni oo taariikh ah. Aragtidaan waxaa loo yaqaanay Almagest. Aragtidan waxaad ku arki kartaa horumar dhammaystiran oo ku saabsan dhammaan qaababkii lagu unkay koonka.
El Almagest Wuxuu yiri Dayaxa, Qorraxda iyo meerayaasha gogol dhaafka ah waxay kuwareegeen dhulka. Waxaan ku jirnay meel go'an oo meerayaasha samada intiisa kale ayaa nagu meersan. Runtii macno ayey samaysay iyada oo aan kormeer dibadeed laga helin. Kaliya waa inaad aragtaa inaan taaganahay, ma naqaano wareegga Dhulka iyo weliba, waa Qorraxda "u dhaqaaq" samada maalin iyo habeenba.
Iyada oo Nicolás Copernicus ah, Qorraxdu waxay noqon laheyd xarunta ma-guuraanka ah ee koonkan, Dhulkuna wuxuu lahaan doonaa laba dhaqdhaqaaq: wareegga laftiisa, oo soobaxaya habeen iyo maalin, iyo tarjumaadda, oo dhalisa gudbinta xilliyada.
Nicolaus Copernicus iyo burburinta xiddigiska 'Ptolemaic astronomy'
In kasta oo aragtidan ay ahayd mid aad u saxan waqtiga oo tixgelinaysa tikniyoolajiyadda waqtigaas, koonka Copernican weli wuu koobnaa oo wuu xadiday waxa loogu yeero meel ka mid ah xiddigaha go'an ee xiddigiska hore.
Burburinta nidaamka Ptolemaic sidoo kale wuxuu udhacay si sahlan tan iyo markii nidaamka Copernicus heliocentric uu gacan ka gaystay yareynta tirada doorsoomayaasha si loo tixgaliyo fahamka caalamka. Maaddaama nidaamka dhaqanku uu jiray 14 qarni, u horseeday horusocodkiisa indha indhayn sharaxaysa dhaqdhaqaaqa 7 meere meeraya. Nicolás Copernicus wuxuu ku gaabsaday in mala-awaalkiisu uu sahlayo in la fahmo caalamka. Kaliya waxay u bedeshay xarunta Qorraxda.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkani kaa caawin doono inaad wax badan ka ogaato Nicolaus Copernicus iyo saamaynta uu ku leeyahay adduunyada cilmiga xiddigiska iyo sayniska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Nicolaus Copernicus
Harooyinka ugu waaweyn adduunka